The Last Ship SEASON 1 – Myanmar Subtitles
Genre: Action & Adventure, Drama, Sci-Fi & FantasyActors: Adam Baldwin, Charles Parnell, Eric Dane, Travis Van WinkleCountry: USAReleased: 2014-06-22Networks: TNTEpisodes: 56 Type: TVScore: 7.5Duration: 41 minYear: 2014–2018View: 3,782
The Last Ship (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး (စစ်အက်ရှင်နှင့် လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှု့တွေအပြည့်အနှက်ထွေမွှမ်းထားတဲ့ စီးရီးကောင်းတစ်ခုကြည့်ရှု့ချင်သူပရိတ်သတ်များအတွက်………. ) The Last Ship ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွဲဟာဆိုရင် Wliiiam Brinkley 1988 ခုနှစ်မှာရေးသားခဲ့တဲ့ The Last Ship ၀တ္ထုကိုအခြေခံပြီးရိုက်ကူးထားတဲ. သည်းထိတ်ရင်ဖိုလျှို.၀ှက်ဆန်းကျယ်အက်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုပါ.။ သည်းထိတ်ရင်ဖို လျှိ့ဝှက်ဆန်းကြယ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေရဲ့ သဘောတရားအရ ကြည့်ရှု့သူကို အသည်းတလှပ်လှပ်ရင်တဖိုဖိုနဲ့ ထိုင်ရာမထတမ်းကြည့်ရှု့နိုင်စေမယ့် ဆွဲဆောင်မှု့မျိုးကို အပြည့်အ၀ရရှိစေတယ်ဆိုတဲ့ ဖန်တီးမှု့မျိုးနဲ့ The Last Ship စီးရီးကို ဖန်တီးပုံဖော်ထားတာ ကိုတွေ့ရပါတယ်.။ သရုပ်ဆောင်တွေကတော့ မြန်မာ ပရိတ်သတ်နဲ့မစိမ်းလှတဲ့ ကမ္ဘာကျော်ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီး Eric Dane (Underworld, Spartacus,Doomsday)တို.မှမင်းသမီးချော Rhona Mitra တို.က အဓိကဇာတ်ဆောင်များအဖြစ်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားကြပါတယ်.။ အမေရိကန်သမ္မတရဲ.လျို.၀ှက်စေခိုင်းမှုအရ ကပ္ပတိန် Chandler ဦးစီးတဲ.သဘောင်္သား ၂၁၇ယောက်ပါဝင်သော အမေရိကန်စစ်သဘောင်္Natha James ဟာသိပ္ပံပညာရှင်ဒေါက်တာ Rachel နှင်.အတူအာတိတ်သမုဒ္ဒရာထဲမှာ လူသားမျိုးနွယ်စုကို အမြစ်ပြတ်ခြေမှုန်းနိုင်လောက်အောင် ဆိုးရွားတဲ့ ရောဂါပိုးတစ်ခုရဲ့ အရင်းအမြစ် တစ်ခုကိုသွားရောက်ရှာဖွေနေတဲ.အချိန်မှာပဲကမ္ဘာကြီးရဲ.၈၀ရာခိုင်နှုန်းလောက် ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရပြီးသေဆုံးသွားခဲ.ရပါပြီ.. ။ အစိုးရအဖွဲ.အစည်းနဲ.လည်းအဆက်အသွယ်မရအခြားနိုင်ငံမှရန်သူတွေရဲ.တိုက်ခိုက်ခြင်းခံရတာကနေဘယ်လိုရုန်းထွက်ကြပြီး လူ့လောကကြီးကို ပြန်လည်ကယ်တင်ဖို့အတွက် တစ်ခုတည်းသော မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာမလေး Rachel ကို အန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အတွက် မဖြစ်မနေစတင်ကြိုးပန်းကြပါတော့တယ်.။ ထူးဆန်းတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်သာမက ရုတ်တရက်ပေါ်လာပြီး ထူးဆန်းတဲ့အန္တရာယ်တွေကြား ကူရာကယ်ရာမဲံနေတဲ့သူတို့အဖွဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်အတွက်ကာကွယ်ဆေးထုတ်ဖို.အခက်အခဲတွေဘယ်လောက် ကြုံတွေ.ခဲ.ရလဲအမိတိုင်းပြည်ကိုပြန်ရောက်တဲ.အခါမှာရောဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေတွေနဲ.ကြုံတွေ.ရမလဲ ဖရိုဖရဲဖြစ်နေတဲ့ လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းကြီးကို ပြန်လည်းအစည်းတည့် အဆင်ပြေအောင် ဘယ်လိုတည်ဆောက်ယူကြရမလဲဆိုတာ ခံစားကြည့်ရှု့လိုက်ကြပါဦးခင်ဗျာ……။ စိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေ အက်ရှင်ခန်းတွေ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှု့တွေအပြည့်နဲ့ စီးရီးကောင်းတစ်ခုကို ညွန်းဆိုပေးလိုက်ရပါတယ်.။
Credit#laikaw online movie store
Translated by YNWA htetnaing
#The Last Ship SEASON 1 #Download The Last Ship SEASON 1 Full Movie #Free The Last Ship SEASON 1 Download